September 2011 ~ ကိုစောဂျက်
WinXSoft.com | Software Updates
15:11 Ko Saw No comments
19/ 9/ 2011
ဆိုဒ်တစ်ခုကို လမ်းညွှန်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုဒ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အသုံးများနေတဲ့ Software တော့တော်များများကို တင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Software ရဲ့ နောက်ဆုံး Updates တွေကိုပါတင်ထားပေးပါတယ်။ windows 8 တောင် ပါလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီမှာ free ရတာများပါတယ်။ အချိန်ရတယ် ဆိုရင် ဝင်ေ၇ာက်လေ့လာကြည်လိုက်ပါ။ လိုအပ်တာလေတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခါထဲ downloads ပါ ဆွဲသွားလိုက်ပါ။ ဆိုဒ် လိပ်စာက http://www.winxsoft.com/ ပါ။ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြောပြပေးတာပါ။
Windows 8 အလိုရှိသူများ အတွက်
12:22 Ko Saw No comments
windows 8 ကို အလိုရှိသူများ အတွက် တစ်ဖိုင့်ထဲနဲ့ downloads ဆွဲလိုရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။
KOMPAS.com - Microsoft has released Windows 8 BUILD conference held in Anaheim, Calif., on Tuesday (09/13/2011). Windows 8, which introducedanew version is for developers or the so-called developer preview.
ဒီအောက်က ၃ ခုမှာ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် windows တစ်ခုခုကို downloads လုပ်လိုက်ပါ။
(1) - Windows Developer Preview English, 32-bit (x86)
(2) - Windows Developer Preview English, 64-bit (x64)
(3) - Windows Developer Preview with developer tools English, 64-bit (x64)
If you choose the version with "developer tools", the user can only do clean install. However, if you choose another, you can upgrade from Windows XP,Windows Vista, or Windows 7.
For Windows 8 x86 (32 bit) minimum specification isa1 GHz processor, 1 GB Ram and 16 GB of storage capacity. As for x64 (64 bit), you needa1 GHz processor,2GB RAM and 20 GB of storage capacity. No matter whichoption will be downloaded, you needaDirectX9compliant GPU with WDDM drivers 1.0 or higher.